Manchester united oo Van Gaal iyo kooxdiisii hore siisay lacag dhan 8.4 Milyan oo Gini – Gool FM
Manchester united oo Van Gaal iyo kooxdiisii hore siisay lacag dhan 8.4 Milyan oo Gini
(Manchester), 13 Sebt 2016 –Kooxda Kubadda Cagta Manchester United ayaa tababarihii hore ee naadigaasi Louis van Gaal iyo kooxdii la shaqeyneysay ee ay shaqada ka joojiyeen Bishii May, siiyay lacag gaaraysa 8.4 Milyan oo Giniga Istarliinka ah.
van Gaal ayaa xilka laga tuuray 48 saacadood kaddib markii uu Man United u hor seeday guushii Koobkii FA-ga oo ciyaartii kama dambeysta ahayd ay ka badiyeen kooxda Crystal Palace.
Xisaabahan loo qoray Van Gaal iyo Raggii la shaqeynayay ayaa ku soo aadaysa xilli shalay Manchester United ay u soo xarootay dhaqaale sanadeed aad u fara badan oo gaaraya 515.3 Milyan oo Gini.
Dhinaca kale Man United ayaa lacag dhan 6.7 Milyan oo Gini u qortay Weeraryahankii hore ee xulka Jarmalka Bastian Schweinsteiger oo isagu aan boos ka haysan safka hore ee kooxda waloow lagu daray liiska ciyaartoyda Man United ay safi doonto sanadkan.
Louis van Gaal & staff got an £8.4m payout from #MUFC after being sacked.
Good for about 155k PER WIN at the club.. pic.twitter.com/N8mYMgKreq
— KICK (@KICK) September 13, 2016
Arsenal oo RIKOODH xun ka sameysay Champions League kulanka ay iminka la yeelaneyso PSG
Lionel Messi oo RIKOODH aan horey loo dhigin ka dhigay tartanka Champions League